Akpakota ihe omimi Akwukwo Nkuzi Nke Ntaneti Iji Mee Ulo Ochichi Ulochi
Mgbe a bịara n'ịchapu, inwe nghọta miri emi banyere HTML na Http bụ ihe kacha mkpa. Maka ịmalite, ịchapu, nke a makwaara dị ka ịgba agba, na-ezo aka n'ịdọta ọdịnaya, ihe oyiyi, na data dị mkpa site na ebe nrụọrụ weebụ ọzọ. N'ime ọnwa ole na ole gara aga, webmasters nọ na-ajụ ajụjụ banyere iji mmemme na njikwa ọrụ na ntanetị weebụ.
Nchịkọta weebụ bụ ọrụ do-it-yourself nke a ga-egbu site na iji igwe igwe. Maka ndi nmalite, ighota nkuzi ihe ntanetiri weebụ ga - enyere gi aka wepu ọdịnaya na odide sitere na weebụsaịtị ndi ozo n'enweghi nsogbu. Nsonaazụ sitere na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce dị iche iche na-echekwa na datasets ma ọ bụ ụdị nke faịlụ ndekọ.
Ngwadogwu weebụ bara uru bụ ngwá ọrụ dị mkpa maka webmasters. Ezi oru na-enyere ndị ahịa aka inweta ọdịnaya na nkọwa ngwaahịa ndị ụlọ ahịa na-ejikarị eme ihe.
Lee ngwaọrụ ndị ga-enyere gị aka wepụ ozi bara uru na nzere sitere na weebụsaịtị weebụsaịtị.
Inwe nghọta miri emi banyere ngwá ọrụ Firebug ga-enyere gị aka weghachite ngwa ngwa sitere na ebe nrụọrụ weebụ achọrọ. Iji wepụ data site na weebụsaịtị, ịkwesịrị ịdebe atụmatụ ndị dị mma ma marakwa ebe nrụọrụ weebụ ga-eji. Nchịkọta ihe ntanetị weebụ na-agụnye usoro ntụziaka nke na-enyere ndị ahịa aka ịdepụta ma wepụ data site na weebụsaịtị.
Kuki kuki ga-esi agafe na ebe nrụọrụ weebụ ga-ekpebi ọganihu nke ọrụ ntanetị weebụ gị. Mee ngwa nyocha iji ghọta HTTP na HTML..Maka webmasters ndị na-ahọrọ iji keyboard kama igosi òké, mitmproxy bụ ngwá ọrụ kacha mma na njikwa iji mee ihe.
Ihe a na-akpọkarị ọnụego na-agbatị, omume ọjọọ na-echetara ndị ahịa na-ere ahịa ka ha belata ọnụ ọgụgụ nke arịrịọ ha na-eme na ngalaba. Iji weputa data n'ụzọ dị irè site na ebe nrụọrụ weebụ e-azụmahịa, tụlee ịdebe ọnụego gị dịka ị nwere ike.
Iji zere iziputa ozi na-abaghị uru na nchekwa data gị, a na-atụ aro ka ị jikọta ma nwalee gị koodu ugboro ugboro. Nnwale na-enyere ndị ahịa aka ịmepụta data ma zere ịchekwa faịlụ ndekọ ndekọ rụrụ arụ.
N'ikpochapu, ịchọta nsogbu okwu ọma na ịkwado ha bụ ihe dị mkpa dị mkpa. Ịghara ịgbaso atumatu na ụkpụrụ nke Google nwere ike ime ka i nwee nsogbu. Ntuzi ihe ntanetị weebụ a ga - enyere gị aka ide usoro nchapu na bọtịnụ na nkwụsịtụ dị mfe na spiders nke nwere ike imebi mgbasa ozi n'ịntanetị gị Source .